DLULA IMil Mi-26 FSX & P3D - Rikoooo
Play 21 381
Umbhali: Amamodeli ngama-airfilips, avuselelwa nguMichael Pook, odabuka khona FSX/P3D buyekeza nguRikoooo
Kubuyekeziwe on 30 / 04 / 2019: Prepar3D i-v4 iyahambelana, ukuguqulwa kuya kokudabuka FSX/P3Difomethi ye-v4
Iphakheji sibonisa alungisa futhi ligcwaliswe VC ezintsha futhi 2D panel, kusukela ezenzakalelayo VC akazange abe Izikali tekusebentisa kwadingeka bitmap nemaphutsa kuletinye kumafolda ukuthungwa, ukuze kwesokunxele VC sigaba kanye ilungelo namakhona kwesokunxele kumhlophe.
Iphinde ibe nephaneli entsha ye-2D, eyakhiwe okokuqala nguVladimir Zhyhulskiy eyakhe FSX inguqulo, kepha manje isishintshiwe ukuze ifane ne-VC. Iphakheji iqukethe nemiphumela eyengeziwe yentuthu. Idizayini entsha ye-VC ne-2D iphaneli nokulungiswa nguMichael Pook. Isibonelo ngu-Alphasim.
I Mil Mi-26 (Russian: Миль Ми-26, NATO igama nokubika: Halo), banikezwe ikhodi umkhiqizo izdeliye 90, kuyinto Soviet / Russian esindayo yezokuthutha helicopter. Enkonzweni baqhubi ezivamile kwezempi, kuba endizeni ngobukhulu futhi enamandla kunazo zonke ezake sebengenwe production.
Design: In the 1970s, iSoviet Union wayefuna anikele owalandela kuya Mi-6 kodwa ukusebenza okuningi ephakeme. A sibonelo sokuqala kwaba wakha, kuqala landizela ngoDisemba 14 1977 izilingo Operational in ibutho lamaSoviet laqala ngo zakuqala 1982, it wangenela inkonzo ngonyaka olandelayo. February 3, 1982, wamisa amarekhodi eziningana zezwe, kuhlanganise Unendiza isisindo esiphezulu (laden) of 56,769 kg 2,000 amamitha. (Wikipedia)